Nerf Blasters kuyogxilisa umuntu abathanda ukudlala "war games." amathoyizi yesimanje futhi enengqondo kakhulu. Umdlalo engokwesiko yempi kuyoba ngisho ezijabulisayo ezithakazelisayo. Nale divayisi ingane uyozizwa uqiniseka ngokwengeziwe. Futhi nakanjani ukukutshela "siyabonga" kulo ithoyizi esiyingqayizivele.
Nerf Blasters angathengwa esitolo intanethi, lapho ukunakwa kwakho uvezwa anhlobonhlobo imikhiqizo kulolu chungechunge.
Mayelana nabo iphupho yabo bonke abafana. izikhali ezinjalo ngeke abashiye nandaba ngisho Amaduna amadala abantu abajabulayo ukudlala nezingane zabo. Nerf Blasters angathengwa ngamunye, noma lishona ukuthi ukunikeza ithuba ukudlala ndawonye. Futhi in the ezahlukene kits zenzelwe target sokudubula.
Nerf Blasters ube design stylish, ezinemibala egqamile futhi inhlangano eliphezulu. Phakathi kwezinye izinto, ukuthi aphephile futhi imvelo. Imicibisholo Blasters eyenziwe polymer foamed, namathiphu zabo akhiwe ngerabha esithambile. Isisindo lokuqala elincane kakhulu, kodwa uhla indiza yabo ongafinyelela 10 metres. Blasters amasethi anemisila isethi eyengeziwe imicibisholo, ngakho manje ungakhathazeki uma izingcezu ezimbalwa ilahleka noma acekelwe phansi.
ithoyizi Blasters "Nerf" - kuyinto lahlukene imikhiqizo okukhethekile, uthome onobuhle imigqomo angadingi lingatshajwa, ziphethe izibhamu omkhulu, izibhamu, ayihlomele izitolo nge namandla imicibisholo 35, uyakwazi isibhamu esisodwa futhi Ukuvutha.
Umenzi libabiza wonke amamodeli izigaba ezimbili:
- Sexy Tag.
Ikilasi lokuqala lihlanganisa Blasters zakudala imodeli. imicibisholo yabo anemisila amathiphu rubberized ukuthi ngesikhathi umthelela akabashiyi izimpawu esikhumbeni wengane kanye abakwazi nganoma iyiphi indlela ukumlimaza, ngisho noma ngabe projectile ukhululeka ibanga close kakhulu.
Class Dart Tag ebanzi xaxa futhi kuhlanganisa lonke iqoqo indima mdlalo. Zingase aqukethe nemishini ezimbili game, amagogolo futhi uwumnikazi wenkampani, kanye Blasters umdlalo owodwa - lokudubula ilitshe elikhanyayo. Omunye umehluko kusuka ochungechungeni N-Strike ihlukile design arrowheads, bakwazi ukubhekana Velcro. Lokho nabo ebusweni abambelela ilitshe noma ibhantshi, kuncike isethi.
Ukuze umoya ongenakulibaleka ngaphezulu mdlalo kuzokwenza engeza imicibisholo ezikhethekile elikhazimulayo.
"Nerf" umdlalo uyokwakha ukunemba, iso futhi yesivalo isivinini yengane yakho. Ngaphezu kwalokho, ukusaphazela imizwelo kusiza ukuphungula nolaka.
Izinzuzo "Nerf" amathoyizi:
- design enengqondo ukuthi uzokubona izingane ezindala;
- eliphezulu futhi imvelo izinto;
- Abanye onobuhle abe emehlweni ukukhanya, udutshulwe nomphumela umsindo;
- inani elikhulu izesekeli ezengeziwe.
Lokhu uhlobo ithoyizi zithandwa kakhulu eYurophu, futhi manje base angathengwa ensimini ka WaseRussia. Ububanzi likhulu, kanti ingane uzokwazi ukukhetha ukuthi kuyoba eduze futhi mnandi: a Blaster amanzi, ukudubula imicibisholo noma ukudlala amasethi.
Jabulela ngithenga yakho, kanye nemizwelo yakho emihle ukuze iqhawe lakho abasha!
Amazwibela we "ngokomzimba Ezifundweni eqenjini phakathi": izici ukubhalisa
"Nikoin" (spray): ukubuyekezwa odokotela, yokusetshenziswa, Izimo
Irises Kunesilevu: uma utshalwe. zimbali ezikhula
Texas: State of usayizi esikhulu futhi umthamo
Jacket Summer amadoda kuzokusiza kusihlwa cool